बेलायत निर्वाचन : कन्जरभेटिभ पार्टी सबैभन्दा ठूलो हुने सम्भावना :: ABC NEWS
Saturday, December 16, 2017 | २०७४ साल पुष १ गते, शनिबार
Hot News Express
बेलायत निर्वाचन : कन्जरभेटिभ पार्टी सबैभन्दा ठूलो हुने सम्भावना
ABC News शनिबार,२७ जेठ २०७४ अन्तर्राष्ट्रिय 0
काठमाडौं । बेलायतमा भएको संसदीय चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलमा सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
चुनावमा प्रधानमन्त्री थेरेसा मे नेतृत्वको कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमत भने गुमाउने देखिएको छ ।
ताजा मतपरिणाममा बिपक्षी लेबर पार्टीले सुधार गर्दै केही सीट बढाउने देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । स्पष्ट बहुमतका लागि ३ सिट २६ सीट जित्नु पर्नेछ ।
संसदको ६ सय ५० सीटका लागि भएको चुनावको मतपरिणामअनुसार अहिलेसम्म कन्जरभेटिभले ३ सय १६ सिटमा जित हासिल गरेको छ ।
सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले ३ सय ३१ सिट जितेको थियो । सन् २०१५ मा २ सय ३२ स्थान जितेको लेबर पार्टीले २ सय ६१ स्थानमा जित हात पारेको छ । अन्य दलमा लिबरल डेमोक्रेटिकले अघिल्लो निर्वाचनमा ८ सिट जितेको यसपटक १२ सिट जितेको छ ।
एसएनपीले अघिल्लो निर्वाचनमा ३५ सिट जितेकोमा यसपटक ५६ सिटमा जित हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले गत वर्ष भएको ब्रेक्सिटमा आएको मतपरिणामलाई ध्यानमा राखेर निर्धारित समयअघि नै निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
बहुमत गुम्नेगरी आएको निर्वाचन परिणामसंगै प्रधानमन्त्री मेको राजीनामाको माग सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री मे भने सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा सरकार गठनको तयारीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री मेले ब्रिटेनले इयु छोडेपछि नया योजना प्रस्तुत
व्रिटेन । प्रधानमन्त्री टरिजा मेले युरोपेली संघ (इयु) का नेताहरु समक्ष ब्रिटेनले इयु छोडेपछि आफ्नो देशमा रहेका लाखौं इयु नागरिकको… शुक्रबार,९ असार २०७४
बेल्जियमा आक्रमणको तयारी गर्दै गरेकाहरु सुरक्षाको कारवाहीमा
बेल्जियम । बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्सको एक रेलवे स्टेसनमा आक्रमणको तयारी गरेको व्यक्ति सुरक्षाकर्मीको कारवाहीमा मारिएका छन् । ब्रसेल्स सेन्ट्रल स्टेसनमा… बुधबार,७ असार २०७४
उत्तर कोरियाबाट रिहा भइ स्वदेश फर्किएका अमेरिकी विद्यार्थीको मृत्यु
कारिया । उत्तर कोरियाबाट रिहा भइ स्वदेश फर्किएका अमेरिकी विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । १५ महिना कैद सजाय काटेर गएको… मंगलबार,६ असार २०७४
फेरि लन्डनमा अर्को ‘आतङ्ककारी’ हमला
लन्डन, ५ असार । उत्तरी लन्डनमा अवस्थित एक मस्जिदनजिकै सोमबार बिहान अर्को आतङ्ककारी हमला भएको समाचार छ । एकजना सवारी… सोमबार,५ असार २०७४
बम विष्फोटनबाट एकजनाको मृत्यु
रुपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्रमा पर्ने नेपालभारत सीमानाका बन्द ।
मतदान गर्ने सही तरिका...
भोट हाल्न गाउँ फर्कदै मतदाता
बनेपाबासीले धमिलो र लेदोयुक्त खानेपानी पिउन बाध्य
Copyright © 2017 ABC News. All Rights Reserved. Designed and Developed by: Softech Foundation.